Ndị nyocha Scripps na-emepụta ọgwụ mgbochi megide riri ahụ Heroin - Ụwa 2022
Ndị nyocha Scripps na-emepụta ọgwụ mgbochi megide riri ahụ Heroin
Ndị na-eme nchọpụta na Scripps Research Institute ewepụtala ọgwụ mgbochi megide riri ahụ heroin, dị ka akwụkwọ akụkọ Scripps si kwuo.
N'ime ọtụtụ iri afọ ndị ọkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ na ọgwụ mgbochi ọrịa iji gbochie ọgwụ ịbata n'ụbụrụ, ọchịchọ maka ọgwụ mgbochi ọrịa riri ahụ abụghị ihe ọhụrụ. Otú ọ dị, maka heroin, akụkọ ahụ dị mgbagwoju anya karị.
Mgbe etinyere ya, ọgwụ ahụ na-agbaji ngwa ngwa wee gbarie n'ime ogige a na-akpọ 6-acetylmorphine na morphine n'ime ọbara, Scripps na-ekwu.
Iji nweta nsogbu ahụ, ndị nchọpụta ahụ mepụtara "ọgwụ mgbochi siri ike" nke na-emepụta ọgwụ mgbochi megide heroin na metabolites ya n'otu oge, dị ka nnyocha e bipụtara taa na Proceedings of the National Academy of Sciences. Mgbe a nwalere na oke, ọgwụ mgbochi ahụ mere ka ogige ndị na-erugharị ụbụrụ na heroin na-akpalite nzaghachi psychoactive ka ọ bụrụ nke ọma na-aga n'ihu n'ime ọbara.
"Ihe si na ya pụta bụ nkwụsị nke ọma nke ọrụ heroin na oke ndị a na-emeso ya, na-egbochi akụkụ dị iche iche nke ọgwụ ọjọọ," ka otu ahụ na-ede. "Ogwu ogwu siri ike na-egosi ikike iji mebie ihe na-agba ume na mkpali nke heroin, ọbụlagodi na isiokwu ndị nwere akụkọ ihe mere eme nke ndabere."
N'otu ule, akwụkwọ akụkọ Scripps na-ekwu na a zụrụ oke ka ọ na-akụ lever ugboro atọ iji nweta ọgwụ heroin, wee gafee ihe a na-akpọ ọzụzụ mkpochapụ, nke lever anaghịzi emepụta ọgwụ heroin. Mgbe ahụ, a gbanyere ụfọdụ ọgwụ mgbochi, ebe ndị ọzọ adịghị, na n'ime oke ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi, otu infusion nke heroin zuru ezu iji mee ka ha laghachi na ịpị lever maka ọgwụ ndị ọzọ, na-eṅomi àgwà nlọghachi nke mmadụ. Oke ndị natara ọgwụ mgbochi ahụ amaliteghachighị omume ịpị aka ha.
N'ime ule nke abụọ, ndị nchọpụta nyere otu oke ọgwụ heroin na-arị elu, wee manye ha ịzere ruo ụbọchị 30 tupu inye ha ọgwụ ahụ ọzọ. Oke ndị natara placebo maliteghachiri iwere heroin na-abawanye ụba, mana oke ndị a gbara ọgwụ agbasaghị.
Scripps'Kim Janda, otu n'ime ndị nchọpụta na-edu ndú na nyocha ahụ, kwuru na n'ime ule ọgwụ mgbochi ọgwụ heroin ndị ọzọ, oke ejirila heroin okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ iji kwụọ ụgwọ maka mbelata nke ọgwụ ahụ. Mana site na ọgwụ mgbochi a, Scripps gbakwụnyere, ha kwụsịrị iri heroin ha kpam kpam.
"N'ụzọ bụ isi, anyị nwere ike ịkwụsị ha site n'ịgabiga usoro ahụ nke ịṅụkwu heroin," ka onye edemede mbụ nke ọmụmụ ihe ahụ, Joel Schlosburg, kwuru na ntọhapụ mgbasa ozi. "Ma nke ahụ bụ naanị ọgwụ mgbochi ahụ; maka ndị ọrịa mmadụ, a ga-eji ọgwụgwọ ndị ọzọ were ọgwụ mgbochi ahụ."
N'iburu nke ahụ n'uche, Scripps na-ekwu na ọgwụ mgbochi ahụ anaghị egbochi mmetụta nke methadone, buprenorphine, ma ọ bụ ọgwụ ndị ọzọ na-eme ihe na-anabata opioid nke a na-ejikarị ewepụ ndị na-eri ahụ na heroin.
Janda kwuru na ọgwụ mgbochi ahụ dị njikere ịkwaga na nnwale mmadụ ma na-achọ ugbu a onye mmekọ na ụlọ ọrụ ọgwụ na-eduzi ha.